देउवाले पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता दुरुपयोग गरेर महाधिवेशन गर्नुभन्दा सीधै आफैंलाई सभापति घोषणा गरे हुन्छः केसी « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, असोज ९ । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले पार्टी सत्ता र राज्यसत्ता दुरुपयोग गरेर महाधिवेशन गर्नुभन्दा सीधै सभापति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिएका छन् । केन्द्रीय निर्वाचन समिति पुलिस-प्रशासन र गुन्डागर्दीमा पनि मूकदर्शक बनेको उनको आरोप छ ।
आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता केसीले भने, पार्टीको विधि, विधान र नियमलाई कुल्चेर सत्ता र शक्तिको स्रोत दुरुपयोग गरी जबर्जस्ती पार्टी कब्जा गर्ने खोज्नु दुःखद पक्ष हो । निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले निर्वाचन भए पो परिणाम स्वीकार्ने हो । बलजफ्ती गरेर हारेमा त्यसको तिक्तता लिएर पार्टी कहाँ पुग्छ ? महाधिवेशन भनेको विपक्षी दलसँगको प्रतिस्पर्धा होइन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो । यस्तो पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? यस्तो अधिवेशन गर्नुभन्दा सीधै सभापति घोषणा गरे भइहाल्यो नि ।”